ကြက်သား ဒံပေါက်ကို အိမ်မှာ ချက်စားကြစို့ by popolay.com
ယိုးဒယားလေဆိပ်ထဲမှာတင် ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်
မလေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နာဂျစ်ကို ငွေအလွဲသုံးစားမှုအတွက် စတင်စစ်ဆေး
အာဏာသိမ်း ၄ နှစ်ပြည့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပေါ်
ဘတ်ထရီစက်ဘီး အလစ်သုတ်သွားတဲ့ကိုယ်တော်အား ရဲတိုင်ကြား
ဆောက်လက်စတိုက်အတွင်း လူသတ်မှုတရားခံကို (၂)ရက်အတွင်း ဖော်ထုတ်နိုင်
ဖုန်းသုံးနေစဉ် မိုးကြိုးပစ်ချခံရပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံး
တောင်ဥက္ကလာပမြို့ တွင် တရုတ်နိုင်ငံသူ ပြည်တန်ဆာအမျိုးသမီး ၁၇ ဖမ်းဆီးရမိ
လူနာကိုမေ့ဆေးပေးပြီး အဓ္ဓမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်အားဖမ်းဆီး
လက်ရဲဇတ်ရဲနဲ့ ခရီးသည်အမျိုးသမီးရဲ့အင်္ကျီကို ဆွဲလှန်ကြည့်တဲ့ တက္ကစီသမား
မကျန်းမာဖြစ်သောအဖိုးရဲ့ ပိုက်ဆံနှင့်ပစ္စည်းများကိုအလစ်သုတ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီး
အိပ်ယာဝင်နောက်ကျခြင်းက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေဆုံးနိုင်
၂၀၁၈ အတွက် မရှိမဖြစ် အကောင်းဆုံး အပလီကေးရှင်း (၁၀)ခု
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်မလိုပဲ (၇)ရက်အတွင်း ဗိုက်ခေါက်ထူကြီး ဖြုတ်ချမယ်
အထာကျကျဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်လိုက်တဲ့ မေတိုးခိုင်
ချစ်သက်တမ်း ၅နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ စိုးသူနဲ့ စိုးမြတ်နန္ဒာ
ပရိသတ်တွေ မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ “ဂျက်လီ” ရဲ့ လတ်တလောဓါတ်ပုံ
အကောင့်ဟက်နေတဲ့ ဟက်ကာကို တောင်းပန်စကားဆိုလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ
ကြက်သား ဒံပေါက်ကို အိမ်မှာ ချက်စားကြစို့
11 Feb 2016 366 Views
ရုံးပိတ်ရက် ၊ ကျောင်းပိတ်ရက် တွေမှာ မိသားစု နဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာကောင်းပြီး အရသာရှိမယ့် ကြက်သားဒံပေါက်ကို ချက်ပြီး တူတူစားနိုင်ဖို့ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ် ။
T = စားပွဲတင်ဇွန်း=၁၅ ဂရမ်/မီလီလီတာ
tsp = လက်ဘက်ရည်ဇွန်း= ၅ ဂရမ်/မီလီလီတာ
C = cup= ၂၃၀ မီလီလီတာ
gm= ဂရမ် ( ၈၀ ဂရမ်= ၅ ကျပ်သား ခန့်မှန်းချေ )
1. ကြက်ပေါင် ၂ ချောင်း
2. ကြက်သွန်ဖြူ ၂ မွှာ
3. ချင်း ပါးပါး ၁ ပြား
4. ကြက်သွန်နီ အရွယ် လတ် ၁ လုံး
5. ဆီ ၂ T
6. ငြုတ်သီးမှုန့် ၁/၄ tsp ( အရောင်တင်မှုန့်)
7. ဒိန်ချဉ် ၂ T
8. ကြက်သွန်နီကြော် ၃ T
9. ဒန်ပေါက် မဆလာ ၁ T
1. ကြက်သားကို သန့်စင်အောင်ဆေး၊ ခြောက်အောင်သုတ်၊ ဆား ၊ဒန်ပေါက်မဆလာ၊ ဒိန်ချဉ် တို့ဖြင့် နယ်ပေးပီး ၁ နာရီခန့် နှပ်ထားပေးပါ။
2. ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်းတို့ကို ညက်အောင်ထောင်းပါ၊
3. အိုးတခုထဲမှာ ဆီ အနည်းငယ် ထည့်ပီး ထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ၊ချင်း တို့ကို ဆီသတ်ပါ။
4. ကြက်သွန်နီသွေ့စပြုပီး မွှေးလာတဲ့အခါ အသင့် နှပ်ထားတဲ့ ကြက်သားများကို ထည့်ပြီး လှိမ့်ပါ၊ အသားတင်းလာတဲ့ အခါ ကြက်သွန်နီကြော် ထည့်မွှေပါ၊ ဒိန်ချဉ်က ထွက်လာတဲ့ ရေနဲ့ ကြက်သား နူးလာတဲ့ အထိ မီးအေးအေး နဲ့ ချက်ထားပါ၊ လိုအပ်ရင် ရေပူ အနည်းငယ်ထည့်ပေးပါ၊
1. ဘက်စမာတီဆန် ၂ ခွက် ( rice cooker cup)
2. ထောပတ်(Ghee) ၁ tsp
3. သစ်ကြပိုးခေါက် ၁ လက္မ အရွယ်
4. ကရဝေးရွက် ၁ ရွက်
5. ကြက်သွန်နီကြော် ၁/၂ ခွက် (rice cooker cup)
6. အ၀ါရောင် ၂-၃ စက်
7. လိမ္မော်ရောင် ၁-၂ စက်
1. ထမင်းပေါင်းအိုးတစ်လုံးထဲမှာ ထောပတ်(Ghee) ထည့်ပါ၊ သစ်ကြပိုးခေါက်နဲ့ ကရဝေးရွက်ထည့်ပါ၊ ပူလာတဲ့ အခါ တချက် နှစ်ချက် မွှေပေးပါ၊ ဆန်ကို အခြောက် အတိုင်းထည့်ပါ၊ အ၀ါရောင် ၂-၃စက်ထည့်မွှေပေးပီရင် ဘက်စမာတီ ဆန် ၂ ခွက် အတွက် ရေ ၃ခွက် ထည့်ပီးချက်ပါ၊
2. ထမင်းကျက်တဲ့ အခါ တ၀က် ကို ဖွဖွလေး ထမင်းမကြေအောင် ခပ်ထုတ်ပီး ကြက်သွန်နီကြော် ဖြန့်ထည့်ပါ၊ ချက်ထားတဲ့ ကြက်သားနဲ့ အနှစ်များထည့်ပါ၊ အပေါ်မှ ဖယ်ထားတဲ့ ထမင်းပြန်အုပ်ပီး ၊ ရေ ၁ စားပွဲတင်ဇွန်း နဲ့ အသင့်စပ်ထားတဲ့ လိမ္မော်ရောင် ကို နေရာကျဲကျဲ ဖြန့်ထည့်ပါတယ်၊ အဖုံးပိတ်ပီး စားခါနီး အထိနှပ်ထားပါ။
3. ထမင်းခပ်တဲ့အခါ အရောင် သမသွားအောင် အနည်းငယ် ဖွပေးလိုက်ပီး၊ အိမ်ချက် ဒန်ပေါက်လေး သုံးဆောင်နိုင်ပါပီပြီ ။
အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဒူးရင်းသီး Pillow
သုံးရက်အတွင်း ဆယ်ပေါင်ကျစေမယ့် စစ်တပ်တွေမှာ သုံးတဲ့နည်း
ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ဖြစ်တတ်သော နောက်ဆက်တွဲရောဂါ လက္ခဏာရပ်များအကြောင်း
လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ရန်ကြွေးကို ဓါးနဲ့အတိုးသတ်
ထန်းတပင်လူသတ်မုဒိန်းမှုမှ မောင်သက်ပြင်းလေးအား ငွေများလှူဒါန်းပေး
တက္ကစီဒရိုင်ဘာက ခရီးသည်အမျိုးသမီးကို တစ်လမ်းလုံး အပြာကားဖွင့်ပြ